TTSweet: တောသူမြို့ရောက် အောချတ် ...
အရှိန်ယူနေတုံး အရင်တစ်နှစ်လောက်က အိမ်ကလူကြီး over sea ရောက်နေတုံး အဖြစ်အပျက်လေး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဟိုဘက်က အစ်မကြီးကွန်းက အောချတ်ဆိုလို့ သတိရသွားတာ။
မဆွိတီဟာ လမ်းတွေ၊ direction တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမှတ်သညာ အလွန်နည်းတယ်ဆိုတာ "ဘေစင်လေးတွေတော့ " ဆိုပြီး အရင်က တစ်ခါရေးဘူးတယ်။ သွားစရာရှိရင် ယောက်ျားပါလို့ကတော့ သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့တာပဲ။ ခုသူက oversea ရောက်နေလေတော့ သွားစရာရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး သွားရတာပေါ့။
မနေ့ကတော့ orchard ဘက်မရောက်တာ ၆လလောက်ရှိပြီ၊ ၀ယ်စရာလေးတွေလဲ ရှိလို့ဆို သမီးကြီးတော်ရယ်၊ သမီးရယ်၊ ဦးဆောင်သူ ဒေါ်ဆွိတီရယ် သွားကြတယ်ပေါ့။ ပနင်စူးလားဘက် ခဏ၀င်ပြီး OG (old girl လို့ မပြောကြေးနော် ...) သွားရအောင်ဆို အော်ချတ်ကို ရထားစီးသွားကြတယ်။ အောချတ်ဘူတာရောက်လို့ ဆင်းပြီး မြေအောက်ကနေ အပေါ်တက်၊ အပေါ်ရောက်တော့ ဘယ်ရောက်နေပလဲလို့ ဘေးဘီ စနည်းနာပြီး ဟိုဘက်နည်းနည်း ဆက်လျောက်တော့ Ion ဆိုတဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာ အသစ်ကြီးတွေ့တယ်။ ဆက်လျှောက်ရင်းနဲ့ Takashimaya ရှော့ပင်း စင်တာဘက် ရောက်လာတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ Takashimaya အကြောင်းပြောရရင် ကိုယ်တို့ကုမ္ပဏီက ဂျပန်ကုမ္ပဏီဆိုတော့ နှစ်စဉ် ကုမ္ပဏီ dinner တွေမှာ ကံစမ်းမဲဖောက်ရင် Takashimaya က ဘောက်ချာတွေ ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဘောက်ချာဆိုတော့လဲ မလွှဲသာ၊ မရှောင်သာ သွားဝယ်ရသပေါ့။ အဲဒီမှာ ၂၀၀ တန်ဘောက်ချာလောက်ဆိုရင် အင်္ကျီ၊ အ၀တ်အစားဆို တစ်ထည်၊ ၂ထည်လောက်ပဲ ၀ယ်လို့ရတယ်ဗျာ။ ပြောရရင် ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ အဲမှာ ၀ယ်လေ့မရှိဘူး။ အောချတ်ရောက်ရင် OG တို့Robinson တို့လောက်ပဲ ကိုယ်က သွားလေ့ရှိတယ်။ (ခုတော့ အားလုံး ဈေးကြီးကုန်လို့ အောချတ်ဘက် ဈေးမပတ်တာကြာပါပြီဗျာ ...) Tan တို့ Isetan တို့တောင် Takashimaya ထက် ၀ယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ စိတ်ကထင်နေတယ်။ အဲဒီလိုသဘောတွေကြောင့် Takashimaya မှာ ၀ယ်လေ့ ပတ်လေ့မရှိ။
ကိုယ်ကသွားချင်တာက OG ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း မျက်စိက လည်နေပြီ။ Takashimaya ကနေ ရှေ့ဆက်လျောက်ရမလား၊ နောက်ပြန်လျှောက်ရမလား မသိတော့ဘူး။ လပ်ကီး ပလာဇာတို့၊ Isetan တို့ ကျော်လာတော့ မဟုတ်လောက်တော့ဘူးဆိုပြီး ဟိုတစ်ကျွန်းကလူကြီးဆီ ဖုန်းဆက်မေးတယ်။ သူက မှားနေပြီ ... ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လျှောက်ရမှာတဲ့ ၊ ဟိုဘက်ကို တော်တော်ပြန်လျောက်ရမတဲ့။ သမီးကလဲ မေမေ ဂျူဂျူတော့ ညောင်းပြီဆို ဂျီကျနေတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်လျှောက်ရင် သမီးတော့ ပင်ပန်းတော့မှာပဲဆို မြေအောက်ဘက် တစ်ခါပြန်ဆင်းပြီး MRT တစ်ဘူတာ နောက်ပြန်စီးလိုက်တယ်။ Somerset MRT ပေါ့။ OG က Somerset နဲ့ ပိုနီးတာတော့ သိထားတယ်။
Somerset MRT ရောက်တော့ အပေါ်တက်၊ John little ရှော့ပင်းစင်တာကြီး တွေ့ပြန်တော့ OG ရောက်အောင် ဘယ်ဘက်လျောက်ရမလဲ မသိပြန်ဘူး။ အမှတ်သညာနဲပုံများး(( ။ အဲဒီနားမှာ Constructiion ဆိုက်တွေကလဲရှိနေတော့ မျက်စိက ပိုလည်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဟိုနားဒီနား စနည်းနာရင်း ထင်တဲ့ဘက်ကို လျှောက်ပြန်တယ်။ လျှောက်ရင်းနဲ့ OG တော့ တွေ့မှာပါဆိုပြီး...... ..... လျှောက်လာလိုက်ကြတာ ... လျှောက်လာလိုက်ကြတာ ... အညိုရောင်အဆောက်အဦကြီး တစ်ခုဆီရောက်လာရော။ ဟာ ... ဒါကြီး မြင်ဘူးသလိုပဲဆို အပေါ်ကိုမော့ ကြည့်လိုက်တော့ လားလား ... အနီရောင်ကြီးနဲ့ ရေးထားတာ " TAKASHIMAYA " ပါ တဲ့ဗျား။
သမီးကြီးတော်က ရယ်လိုက်တာ။ တဟားဟားနဲ့။ Takashimaya မသွားချင်လို့ မြေအောက်က နေတောင် ရထားနောက်ပြန်စီးလာတာ ... အပေါ်ရောက်ပြီး လမ်းပြန်လျှောက်တော့လဲ Takashimaya ပါပဲလားတဲ့။ ကိုယ်လဲ ရယ်ရတာ အူတွေကို နာနေတာပဲ။ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ဆိုတာလိုပဲ။
ဒါနဲ့ မှားပြန်ပဟဆို နောက်ပြန်လျှောက်တော့မှပဲ OG ကို ရောက်တော်မူပါတော့တယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်က အရှက်ပြေ .. အမကလဲ Takashimaya က ၂ခုရှိတာကို ... စောနကတွေ့ခဲ့တာက ပိုဝေးတယ်လို့ ... ပြောရတယ်။ အမှန်က ၂ခုက ကပ်ရပ်ရယ် ...
Posted by T T Sweet at 3:37 PM
သက်ဝေ November 3, 2010 at 4:54 PM
တကယ်ကြီးဆိုရင်တော့ တော်တော် ဆိုးတဲ့ မဆွီတီပါပဲ...
လျှောက်လိုက်ရတဲ့ ခရီးက မနဲဘူး... သမီးလေး သနားပါတယ်...။
OG = Only Girl လို့ပဲ မှတ်ထားလိုက်တယ်... ဟီး...
ဖိုးတုတ် November 3, 2010 at 5:16 PM
ကျွန်တော်လည်း စလုံးကို ရောက်စတုန်းက လမ်းခဏခဏမှားဖူးတယ် မဆွိပို.စ်က စလုံး/orchard မရောက်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဘာတွေပါလိမ့်ဆိုပြီး အတွေးပွားစရာရှိပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူတွေအများစုက စလုံးကဆိုတော့ ပြဿနာမရှိပါဖူး
Sunny November 3, 2010 at 6:18 PM
စလုံးက လမ်းတွေတော့ မသိပါ.. ဒါပေမယ့် တီဆွိတို့ လမ်းမှားပြီး အကြာကြီးလျှောက်လိုက်ရတာကိုတော့ သိပါသည်.. ဟိဟိ
T T Sweet November 3, 2010 at 6:21 PM
အန်တီသက်ဝေ ... အဖြစ်က ယုံနိူင်စရာတောင် မချိဘူးလားဟင် ... ဒီလောက်ဆိုးသလား။ ကိုယ်ကတော့ ဖြစ်နေကျဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ရယ်ပဲရယ်ချင်နေတာ။
သမီးတော့ ရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးပြီးတာတောင် ဂျီကျနေလို့ ချီခေါ်ရသေးတယ်။
ကိုဇီ ... ဟုတ်တယ် ... လာဖတ်သူတွေက စလုံးကပိုများပါတယ်။
ရေခဲမုန့် နဲ့ အိုက်စခရင် နှစ်မျိုးမှ မကျွေးတာဗျနော် ဂျူးဂျူးရေ နောက်တခါ နှစ်ခုလောက်တောင်းမှ စိတ်ဆိုးပြေဟ
ဝက်ဝံလေး November 3, 2010 at 10:04 PM
ဟွင့် များက မရောက်ဖူးဘူးလေ ဒေါ်ဒေါ် ဆွီရဲ့
များလဲ လမ်းမှားပဲ မြေပုံကို မကြည့်တတ်ဘူးရယ် သူပြထားတဲ့ မြေပုံက တမျိုး များ သွားရင် တမျိုးနဲ့ ရွာတွေ လည်ကုန်လို့ ပါးစပ်ပါရင်ရွာရောက် ဆိုသလို သူများပဲ မေးတယ် သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ သွားတယ် နောက်တခါ သွားလဲ အဲလိုပဲ
Now no more John Little in Somerset. That place was taken over by 'Courts' electronic store.
မြူးမြူး November 4, 2010 at 5:28 PM
အောချတ်သွားရင် လမ်းပျောက်တာကတော့ ပြောမနေနဲ့.. ခုထက်ထိကို ကောင်းကောင်းမသွားတတ်သေးဘူး.. သွားရင်းနဲ့ကို MRT ထဲပြန်ပြန်ရောက်လာတာ.. :)
လသာည November 4, 2010 at 10:38 PM
“လမ်းတွေ၊ direction တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမှတ်သညာ နည်းတာ” ဦးခြိမ့်အားကိုးနဲ့ မမှတ်ပဲနေတာမို့လား.. :D
khin oo may November 5, 2010 at 2:00 AM
Moe Cho Thinn November 8, 2010 at 2:15 PM
တော်သေးတာပေါ့။ OG ကို ရောက်တော့ ရောက်ခဲ့သေးလို့..
ချိုသင်းလဲ အမှတ်သညာ နည်းတယ်။ ဒီနေရာ ရောက်ဖူးသလိုပဲ ထင်နေတာ အိမ်နားဖြစ်နေတယ်။ ဒါတောင် နေတာ ၄ နှစ် ကျော်နေပြီ။